जनता क्याम्पसको चुनावी मैदानमा को-को छन उम्मेदवार ? नाम सहित - Saptakoshionline
जनता क्याम्पसको चुनावी मैदानमा को-को छन उम्मेदवार ? नाम सहित
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १२, २०७६ समय: ८:४०:२१
इटहरी , जनता बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन समिति निर्वाचनको अन्तिम नामावली ११ गत्ते शनिबार ५ बजे प्रकाशित भएको छ । नयाँ कार्यसमिति चयनको लागि जारी निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत अन्तिम नामावली प्रकाशित भएको हो । प्रकाशित नामावली सँगै नयाँ कार्यसमितिको लागि चुनावी प्रक्रिया शरु भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
२७ जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएकोमा पटक पटक को छलफल पश्चात १५ जनाको उम्मेद्वारी फिर्ता नभए पछि अन्तिम नामावली प्रकाशित गरि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको हो । १३ जना सदस्य निर्बाचन बाट,४ जना सदस्य मनोनित गरि व्यवस्थापन समितिमा १७ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
१३ जना निर्बाचित व्यवस्थापन समिति हुने भएकाले चुनाबी मैदानमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, राप्रपा र समाजवादी पार्टीको संयुक्त प्यानल बनेको र आफु स्वतंत्रै उम्मेद्वार भएको यज्ञ बहादुर कटवालले जानकारी दिए । दलीय सहमति अनुसार १३ सदस्यीय सयुक्त प्यानल बनेको छ । भागबण्डा अन्तर्गत काङ्ग्रेसको तर्फबाट ६, नेकपा बाट ५ र राप्रपाबाट २ जनाको उम्मेद्वारी रहेको छ ।
दलीय प्यानलमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट विकास केसी, तीर्थ पराजुली, शिवराज दाहाल, देवु निरौला, ज्योति कोइराला र प्रमोद भट्टराईको उम्मेद्वारी परेको छ । नेकपा बाट का रेवतीरमण भण्डारी, चन्द्र भट्टराई, रेवतीप्रसाद घिमिरे, ईश्वर भट्टराई, भीमप्रसाद सुवेदी , राप्रपाबाट युगप्रिय निरौला र आकाशहाङ लिम्बू , समाजबादी बाट सुहाम फेवा लिम्बु लाई मनोनित सदस्य बनाउने दलीय सहमिति भएको छ ।
दलीय प्यानल बाहेक स्वतन्त्र उम्मेद्वार रुपमा यज्ञ बहादुर कटवाल र हेमसागर तिम्सिना चुनावी मैदानमा देखिएका छन् । निर्वाचन समिति संयोजक गीता अधिकारीका अनुसार १४ गते मङ्गलबार बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म चुनाव हुने भएको छ ।